8 martsa 2018 : Hafatr’i Ramatoa Voahangy Rajaonarimampianina, vadin’ny Filoham-pirenena | Présidence de la République de Madagascar 8 martsa 2018 : Hafatr’i Ramatoa Voahangy Rajaonarimampianina, vadin’ny Filoham-pirenena – Présidence de la République de Madagascar
Accueil » Actualités » 8 martsa 2018 : Hafatr’i Ramatoa Voahangy Rajaonarimampianina, vadin’ny Filoham-pirenena
8 martsa 2018 : « Fotoana izao, mampisandratra ny fiainan’ny vehivavy ireo mpikatroka eny ambanivohitra sy eny an-tanandehibe »
Ry Andriambavilanitra manerana ny nosy, ankalazaina anio ny andron’ny 8 martsa izay natokana ho antsika vehivavy. Koa am-pifaliana sy amin’ny fo feno fitiavana no iarahabako antsika vehivavy Malagasy tsy ankanavaka amin’izay toerana misy antsika tsirairay avy. Ny taona 2018 dia nihamafy ny fitakiana maneran-tany ny hanafainganana arak’izay tratra ny fiovana eo amin’ny sata sy ny zon’ny vehivavy, ny fampitovian-jo eo amin’ny lahy sy ny vavy. Manakoako izany fitakiana izany taorian’ny hetsika tsy hay notohaina, izay niandoha ny volana oktobra 2017, hetsika izay mbola mitohy manerana izao tontolo izao ka maro ireo sahy mijoro ho vavolombelona, sy mitory ampahibemaso tsy matahotra intsony, ny faneriterena sy herisetra isan-karazany, izay nanova ny endriky ny fankalazana ny 8 martsa 2018 izany hetsika izany raha ny hevitr’ireo mpandinika ny fiaraha-monina sy ny ao amin’ny Firenena Mikambana.
Mamelà ahy ianareo hahatsiaro manokana ireo vehivavy tra-pahasahiranana amin’ny lafiny rehetra, ireo vehivavy miady mafy amin’ny endri-pijaliana maro samihafa, tsy afaka misitraka ny zony amin’ny maha vehivavy azy nohon’ny trangan-javatra isankarazany. Ho antsika eto Madagasikara dia mahavelom-bolo ny mahita ny fiezahan’ny vehivavy na an-tanandehibe na any ambanivolo, fa fanoitra ilaina izy ireo ka tsy azo idivirana na dinganina eo amin’ny sahan’ny fampiroboroboana sy ny fivoaram-pirenena. Manampy ny vehivavy ny drafitrasa maro izay notanterahin’ny fanjakana, ahatomombana ny maha olom-pirenena mizaka zo feno azy ireo. Mavesa-danja mantsy ny fiahiana ny reny sy ny zaza ao anatin’ny drafitrasa tontosaina eto amin’ny firenentsika, indrindra ara-pahasalamana sy eo amin’ny fanabeazana. Ahoana tokoa moa no ahafahan’ny vehivavy hiasa, hanabe ny zanany, hiteraka, raha toa ka tsy salama izy tenany ? Ahoana no ahafahan’ny vehivavy mirotsaka amin’ny sehatry ny asa raha tsy manita-pahalalana sy manovo fianarana na manaraka ny fampiofanana, mianatra ny fampiasana solosaina, hanatevenana ny traikefa ananana ? Izay no nahatonga anay nikiry ary niezaka nanokatra ireny ivo-toerana fampiofanana vehivavy na Centre de formation professionnelle, nanangana trano famakiam-boky sy ny sisa any amin’ny faritra maro eto amin’ny Nosy. Ahoana no ahafahan’ny olona iray miarina raha sendran’ny herisetra ?
Nifanaraka tamin’ny mpiaramiombon’antoka hanangana ireny ivo-toerana Vonjy ho an’izay niharan’ny herisetra isankarazany. Ny tanjona dia hanenika an’I Madagasikara izy ireny. Ny antsika tsy hoe fankalazana fotsiny ihany no atao mandritra ny herinandro entina hanamarihana ny 8 martsa 2018, fa dia narafitra mihitsy ny lanonana mba hampisongadina sy hahitana taratra ny sehatra vita sy tratra niarahantsika vahoaka sy ny fanjakana ary ny mpiaramiombon’antoka, mba hanorenana fiainana tsara kokoa hoan’ny vehivavy Malagasy. Hatramin’ny voalohany dia nisy ny tsipi-dàlana mazava sy voafaritra: manaisotra ny vehivavy amin’ny fahantrana amin’ny alalan’ny fitsinjovana ny fahasalamany, ny fampianarana azy, ny fanofanana hahafahany mandray an-tanana ny fiainany, hahitana fivelomana ampy sy maharitra. Izao fankalazana izao koa dia natao ho fampatsiahivana ny dingana vita ary hibanjinana koa ny diabe mbola hizorantsika miaraka, hahatongavana amin’ilay tanjona fampandrosoana maharitra na Objectif de Développement Durable, izay ilofosantsika miaraka amin’izao tontolo izao. Tsy tako-nafenina fa mbola lavitr’ezaka izany diabe izany, kanefa tsy misy mafy tsy laitran’ny Vehivavy Mahefa Malagasy. Mankasitraka feno antsika vehivavy izay tsy nitaraina tana-miepaka fa nitondra ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana ny firenentsika araka ny tandrify azy avy. Mino sy manantena aho fa hitozo hatrany isika ka tsy efa eto am-pamoloana vao hiverin’ilalana. Aoka isika hijoro hiaro ny bainga voavadika amin’ny alalan’ny fiaraha-mientana manohy ny asa ao anatin’ny fifampitokisana.
Eto dia misaotra ny Filoham-pirenena sy ny Governemanta izay nanohana sy nanampy hatrany antsika vehivavy Malagasy hisondrotra, hivoatra ary hifanampy amin’ireo vady andefimandrintsika sy ny zanantsika. Mamerina ny fisaorana ho an’ireo mpiaramiombon’antoka eo amin’ny sehatra tsy miankina eto antoerana sy ny firaisamonim-pirenena, izay namaly hatrany ny antso nataontsika amin’ny alalan’ny famatsiana ara-bola sy teknika ho fanohanana sy famporisihana amin’ny asa rehetra. Tsy maintsy lazaina satria, na teo aza ny faniriana sy ny finiavana, raha tsy misy fifanampiana, tsy be tahaka izao ny bainga voavadika.
Ho ela velona anie ny Vehivavy Malagasy !
← Décret N° 2018 – 180 portant convocation du Parlement en session extraordinaire
Inauguration de la station de pesage d’Ambohimalaza, sur la RN2 →